China Lawn Mower Ngwa na ndị nrụpụta | Xuanyi
Ntụ ntụ Metallurgy Gear
Ntụ ntụ Metallurgy Structural Parts
Ngwa eji asụ ahịhịa
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ike
Mmanụ Mgbapụta Mmanụ
Ngwá Ọrụ Igwe Ngwá Ọrụ Ngwaọrụ Ngwa Ngwa Ngwa
Akụkụ ụgbọ ala
Uru nke usoro nhazi nke uzuzu
1, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọla na ihe ndị dị na ha, alloys ụgha, ihe ndị na-abaghị uru nwere ike ịmepụta naanị site na usoro ntụ ntụ.
2, n'ihi na a ga-etinye usoro ngwongwo ntụ ntụ n'ime njedebe nke mkpokọta, na-enweghị ma ọ bụ obere mkpa maka nhazi nhazi ọzọ, ọ nwere ike ịchekwa igwe, belata ọnụahịa ngwaahịa .Ọfu ọla na imepụta ngwaahịa site na ntụ ntụ metallurgy usoro bụ naanị 1-5%, ebe ọnwụ nke ọla na mmepụta nke ngwaahịa site na usoro mgbatị nkịtị nwere ike ịbụ 80%.
3, n'ihi na usoro ntụ ntụ nke ntụ ntụ na usoro mmepụta ihe anaghị agbaze ihe ahụ, ọ naghị atụ egwu ịgwakọta na adịghị ọcha nke ọkpụkpọ na deoxidizer wetara, a na-ejikwa nsị na-eme ihe na-adịghị mma ma na-ebelata ikuku, ọ bụghị ịtụ egwu oxidation. , ma ghara inye mmetọ ọ bụla na ihe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịme ihe dị ọcha dị elu.
4, usoro uzu nke uzo nwere ike ijide nha nha na nhazi nke ihe mejuputara ihe. 5, uzuzu uzo di nma maka imeputa otu udi na otutu onu ahia, karia ihe ndi ozo na ihe ndi ozo di elu nke ahia, ya na ihe ndi ozo. n'ichepụta ihe nwere ike belata nnukwu ụgwọ ọrụ.
Usoro nhazi nke usoro uzuzu nke uzuzu bu
1, nkwadebe nke ihe eji eme ihe. Enwere ike imeghari uzo di iche iche na uzo abuo: igwe na physico-chemical.The usoro a ga-ekewa n'ime: usoro ndọtị na atomization usoro; A na-ekewa usoro anụ ahụ na kemịkalụ na ntanetị nke electrochemical. usoro, usoro mbelata, usoro kemịkal, usoro mbelata-kemịkalụ, usoro ntinye vapo, usoro ntinye mmiri mmiri na usoro electrolysis.The usoro a na-ejikarị eme ihe bụ Mbelata, atomization na electrolysis.
2. Powder akpụ ka chọrọ udi nke oghere block.The nzube nke ịkpụzi bụ ime ka a ụfọdụ udi na size nke kọmpat, na-eme ka o nwere ụfọdụ njupụta na ike.The ịkpụzi usoro na-ihu ọma kewara n'ime mgbali ịkpụzi na-abụghị - Nkedo nrụgide bụ ihe nkedo kachasị eji eme ihe.
3. Sintering nke billet.Sintering bụ isi usoro na ntụ ntụ metallurgy.The ikpeazụ anụ ahụ na n'ibu Njirimara na-enwetara site sintering na compacted oghere mgbe forming.Sintering ekewa n'ime unit sintering na multi-akụrụngwa sintering.The sintering okpomọkụ bụ ala karịa agbaze agbaze nke igwe na ihe eji eme ihe maka usoro ihe siri ike nke sistemu nke igwe na otutu ihe. Maka ihe na-eme ka mmiri na-agba mmiri nke sistemụ ọtụtụ ihe, ọnọdụ nsị na-adịkarị ala karịa ebe mgbaze nke ihe ndozi, ma dị elu karịa agbaze nke ihe na-agbaze. Na mgbakwunye na nsị nkịtị, enwere nsị rụrụ, gbazee ụzọ ọgbụgba, usoro ịpị ọkụ na usoro ndị ọzọ pụrụ iche.
4. Nhazi usoro nke ngwaahịa.The ọgwụgwọ mgbe sintering nwere ike nakweere na a dịgasị iche iche nke dị ka dị iche iche chọrọ nke ngwaahịa.Such ka gụsịrị, imikpu, machining, okpomọkụ ọgwụgwọ na electroplating.In mgbakwunye, na-adịbeghị anya, etinyekwara usoro ọhụrụ dịka ịpịgharị na ịkpụzi na nhazi nke ihe eji arụ ọrụ ntụ ntụ ma mechaa rụpụta nsonaazụ kacha mma.
Ntụ ntụ metallurgy ihe na ngwaahịa na ọdịnihu mmepe direction
1, nnọchianya nke ígwè dabeere alloy, ga-abụ nnukwu olu nke ziri ezi na ngwaahịa, elu àgwà bughi akụkụ development.
2. rụpụta elu arụmọrụ alloy na edo microstructure, siri ike nhazi zuru ezu njupụta.
3. alloys pụrụ iche, nke na-agụnyekarị ngwakọta agwakọta, na-arụpụta site na usoro mgbatị agbalite.
4, n'ichepụta ihe dị iche iche, amorphous, microcrystalline ma ọ bụ alloy metastable.
5, nhazi ụdị pụrụ iche na nke na-abụghị nke izugbe ma ọ bụ mejupụtara nke akụkụ ndị mejupụtara.
Nke mbụ, uru nke usoro nhazi nke ntụ ntụ
1, nwere ike hazie ihe pụrụ iche.Material ntụ metallurgy ụzọ nwere ike mepụta refractory ọla yana yana ogige, pseudo alloys, na porous ihe.
2, chekwaa metal, belata onu ahia.n'ihi na enwere ike ime ka ihe di iche iche mejuputa ya, o nweghi nkpa iji nhazi ihe. Ngwunye nke igwe meputara bu uzo 1 rue 5, ma e jiri ya tụnyere 80 percent. nkịtị nhazi.
Mmepe nke ngwaahịa ntụ ntụ
1, akụkụ dị elu dị elu: ntụ ntụ metallurgy bụ ihe nnọchianya nke alloy nke a na-etinye ígwè, a ga-etolite na nnukwu ngwaahịa nke ngwaahịa ziri ezi, akụkụ akụkụ dị elu.
2, akwa arụmọrụ alloy: uzuzu metallurgy n'ichepụta nwere edo microstructure Ọdịdị, nhazi siri ike na kpamkpam ok akwa arụmọrụ alloy.
3, ngwakọta ngwakọta ngwakọta pụrụ iche: ntụ ntụ na-arụ ọrụ na usoro ịgbalite iji mepụta ngwungwu pụrụ iche nke nwere ngwakọta ngwakọta ngwakọta.
4, akụkụ ndị mejupụtara: nhazi ụdị pụrụ iche na nke na-abụghị nke izugbe ma ọ bụ ihe mejupụtara akụkụ ndị mejupụtara.
5. Nkwadebe nke ihe ndị dị ọcha dị elu.Powder metallurgy usoro na usoro mmepụta ihe anaghị agbaze ihe ahụ, ọ gaghị agwakọta ya na ihe ndị ọzọ na-eweta site na adịghị ọcha, a na-eme nsị na agụụ ma na-ebelata ikuku, na-atụghị egwu oxidation na agaghị enwe mmetọ nke ihe ahụ. Ya mere, ịdị ọcha nke ngwaahịa a dịtụ elu.
6, Ndozi nke nkesa ihe.Powder metallurgy usoro nwere ike hụ na ihe ziri ezi na nha anya nke ihe mejupụtara na oke.
7, imepụta ihe iji belata ọnụahịa.Powder metallurgy dabara adaba maka imepụta ngwaahịa nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke edo edo, dị ka ngwa na ngwaahịa ndị ọzọ nwere ọnụ ahịa dị elu, nke nwere ike belata oke mmepụta.
Nke gara aga: Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ike
Osote: Powder Metallurgy Stainless Steel
Nchara mgbochi usoro maka ígwè & ...
Ntụ ntụ metallurgy ngwaahịa eji m ...
Usoro nke ntụ ntụ metallurgy ...
Uru na ngwa nke po ...
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086-13566055739